Lehilahy lehibe sy vehivavy tanora kely mifankatia… olana be ve ?
Fomba fiteny foana ny hoe : tsy misy taonany ny fitiavana, ary koa ny hoe : tsy mifidy iantefana ny fitiavana.
Na izany aza anefa, mbola manelingelina ny mason’ny fiarahamonina, amin’ny ankapobeny, ny mahita lehilahy efa be taona sy vehivavy tanora kely miaraka. Ratsy foana ny fitsara azy ireny matetika, nefa mety ho tena fitiavana no iarahan’izy roa…
Tsy misy taonany ny fitiavana ?
Samy manana ny karazan’olona mety hampifoha ny fitiavany ny olona tsirairay. Ny tsikaritra kosa dia tsy tena mipetraka foana ilay fomba fiteny hoe : “tsy misy taonany ny fitiavana”, rehefa mandinika ny fiarahamonina. Rehefa samy nahazoazo taona mantsy ny mpifankatia dia toa tsy manelingelina loatra firy ilay elanelan-taona. Eken’ny fiarahamonina kokoa, ohatra, ny fiarahan’ny lehilahy 60 taona, amin’ny vehivavy 40 taona, raha mitaha amin’ny fifankatiavan’ny lehilahy 38 taona, amin’ny vehivavy 18 taona, nefa dia mitovy tanteraka ny elanelana amin’ireo tranga roa ireo : samy 20 taona !
Misy ve ny elanelan-taona idealy ?
Tsy misy loatra ny lalàna mifehy ny taonan’ny fitiavana eo amin’ny olona mifankatia, fa rehefa samy ampy taona daholo ny lahy sy ny vavy dia mety. Mba ialàna amin’ny mety ho vavam-bahoaka anefa dia tsara ihany raha toa ka tsy mihoatra amin’ny antsasaky ny taonanao, ny elanelan-taona eo aminareo roa. Toy izao izany, raha atao ohatra : raha 20 taona ianao, 10 taona ny antsasaky ny taonanao, dia tokony ho 30 taona izany, raha lehibe indrindra, ilay olona miaraka aminao. Raha 40 taona ianao, 20 taona ny antsasaky ny taonanao, dia tokony ho 60 taona izany, raha lehibe indrindra, ilay olona miaraka aminao…
Fa inona no olana ?
Ny tena olana mantsy, rehefa be loatra ny elanelan-taona eo amin’ny mpifankatia dia efa tsy mitovy intsony ny zavatra ironan’ny saina, ny tanjona sy ny fomba fiaina. Mety ho tsy mbola mieritreritra fiarahana matotra be firy, ohatra ilay tanora kokoa, nefa efa te hiroso amin’ny fanambadiana sy te hanan-janaka ilay be taona kokoa. Tokony hazava tsara eo amin’ny mpifankatia izany, ka hahay hifandefitra sy hifankahazo ary hikaroka ny marimaritra iraisana hatrany, raha toa ka olona roa mielanelan-taona lavitra no miaraka.